Meloxicam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန် - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇွန်လ 2022
မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီ, သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ရပ်ရွာ၊ ဆီးဂိမ်း ကျန်းမာရေး ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> Meloxicam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်
Meloxicam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | အလေးချိန်တိုးလာသည် | အလွန်အကျွံသုံးစွဲ | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ | သတိပေးချက်များ | အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ
Meloxicam သည်ယေဘူယျဆေးညွှန်းဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရိုးပွရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်လူငယ်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားသောနာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ Mobic, Vivlodex, Qmiiz နှင့် Anjeso အမှတ်တံဆိပ်အောက်ရှိဆေးဝါးများတွင်လည်း meloxicam ကိုပါးစပ်ဖြင့်တက်ဘလက်၊ ဆေးတောင့်၊ ပျက်စီးစေသောတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ပါးစပ်ဆိုင်းငံ့မှုအဖြစ်ခံယူနိုင်သည်။
အဖြစ် nonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါး (NSAID) , meloxicam သည်လူသိများသောဆေးများဖြစ်သော Aspirin၊ Ibuprofen နှင့် Naproxen တို့၏မိသားစုဖြစ်သည်။ သို့သော် meloxicam သည် Advil သို့မဟုတ် Aleve တို့၏ amped-up version တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ meloxicam သည် NSAID ဆေးညွှန်းအနေနှင့်သာမန်နဂိုအတိုင်းဖြစ်သော NSAIDs များထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ဘေးအန္တရာယ်များ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊
သက်ဆိုင်သော: meloxicam အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ | meloxicam အထူးလျှော့စျေးများကိုရယူပါ
Meloxicam ၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (အကျိုးသက်ရောက်စေသည် 2% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို ဆေးသောက်နေသူတွေ
အရည် retention ကို
Meloxicam သည်ပြင်းထန်။ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်:
အစာအိမ်သို့မဟုတ်အူအတွင်းသွေးထွက်, အနာ, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်ထား
ပြင်းထန်သောနှင့် အလားအလာရှိသောအသက်အန္တရာယ် အသက်ရှူကျပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောအရေပြားတုံ့ပြန်မှုစသည့်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများ
ခေါင်းကိုက်ခြင်းများသည် meloxicam ၏အဖြစ်များသော၊ လေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။ ၁၂ ရက်သတ္တပတ် ၁၂ ပတ်ကြာသည့်အရိုးပွရောဂါသို့မဟုတ်အဆစ်အဆစ်ရောင်နာဝေဒနာရှင်များအား Meloxicam ကိုသောက်သောလူများ၏ ၅.၅% မှ ၈.၃% အကြားခေါင်းကိုက်ခြင်းများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ခြောက်လစမ်းသပ်မှုများတွင်meloxicam ကိုသောက်သုံးသူ ၂.၆% မှ ၃.၆% သည်ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုဆေးထိုးမှီခိုပုံမပေါ်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများမှာ Meloxicam ၏ထူးခြားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။ သို့သော်အရည်ထိန်းခြင်း (edema) သည်ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး Meloxicam ကိုသောက်သောလူများ၏ ၀.၆% မှ ၄.၅% တွင်အစီရင်ခံသည်။လက်တွေ့လေ့လာမှုများ။ မကုသရသေးသော၊ edema သည်အားနည်းသူများအတွက်နှလုံးရောဂါအပါအဝင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ အရည်ထိန်းထားမှုကိုခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တိုး။ မရခြင်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အတင်းအဓမ္မကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းကိုဆရာဝန်သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်ထံတင်ပြသင့်သည်။
NSAID တစ်ခုအနေဖြင့် meloxicam အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည့်ကျန်းမာရေးပြissuesနာများဖြစ်စေနိုင်သည် ပိုပြီးဘုံအတွေ့အကြုံများ Aspirin နှင့် ibuprofen စသည့်ဆေးဝါးများအကန့်အသတ်မရှိ NSAIDs များသောက်သုံးသူများသည်။ NSAID အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း၏အဖြစ်အများဆုံးလက္ခဏာများမှာ -
အနက်ရောင်သို့မဟုတ် tarry မစင်
ပြင်းထန်သောအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း၊ မေ့မြောခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့်သေခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ NSAID အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုလက္ခဏာများရှိသူများသည်ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်သည်။
Meloxicam ၏အဖြစ်များသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများစုမှာယာယီသာဖြစ်ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးကိုရပ်စဲပြီးနောက်ပျောက်သွားနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာ meloxicam အများကြီးပိုရှည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေထိုင် အခြား NSAID ဆေးများထက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်နောက်ဆုံးဆေးသောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ရက်ကြာနိုင်သည်။ အနာနှင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းမှသွေးထွက်ခြင်းကဲ့သို့သောပိုမိုပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ meloxicam ကိုမရပ်တန့်ခင်၌ပင်ဖြေရှင်းရန်အချိန်များစွာကြာနိုင်သည်။
Meloxicam contraindications & သတိပေးချက်များ
NSAID ဆေးညွှန်းအားလုံးကဲ့သို့ meloxicam သည်လူအချို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများထက်သာလွန်သည့်အန္တရာယ်များရှိသည်။ ဆန့်ကျင်သောလက္ခဏာများနှင့်သတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့်လူအချို့အတွက်ဆေးသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိမရှိ FDA ကဆုံးဖြတ်သည်။ အချို့သောလူများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဆိုးကျိုးများအတွက်ဆေးဝါးသည်မြင့်မားသောအန္တရာယ်ကိုသယ်ဆောင်သည့်အခါဖြစ်သည် ဆန့်ကျင် အဲဒီလူတွေအတွက်ပါ ဘယ်တော့မှမ သူတို့အားလူနာအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့။ အချို့သောလူနာများတွင်ဆေးသည်ပုံမှန်ထက် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသည့်အခါ၊ သတိပေးချက်။ ဆေးကိုသောက်ရန်အဆင်ပြေသော်လည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်သောက်သုံးခြင်းသည်စောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းလိုအပ်သည်။
Meloxicam နှင့်ဓာတ်မတည့်မှုရှိသူများအား meloxicam သို့မဟုတ်အခြား NSAIDs များတွင်မည်သည့်အခါမျှအသုံးမပြုသင့်ပါ။
နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောကိုရှောင်ကွင်းအဂတိလိုက်စားမှု (CABG) ခွဲစိတ်မှု
ပိုမိုသိသော bypass ခွဲစိတ်ခြင်းသို့မဟုတ် coronary bypass ဟုခေါ်သော CABG ခွဲစိတ်ကုသမှုသည်နှလုံးသွေးကြောများသို့ပုံမှန်သွေးစီးဆင်းမှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်သွေးကြောပိတ်ဆို့ထားသောသွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောတစ်ဝိုက်ကိုလှည့်ပတ်ခြင်းဖြင့်သွေးကြောဆိုင်ရာအဂတိလိုက်စားမှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ Meloxicam သည်သွေးခဲခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုရှောင်ကွင်းခွဲစိတ်ခြင်းမပြုမီသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းကိုအသုံးမပြုပါ။
လူအချို့တွင် Aspirin မပါသည့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလည်းရှိသည် Aspirin ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (AERD) ။ Aspirin သို့မဟုတ်အခြား NSAIDs များပေးသောအခါ AERD ရှိသူများသည်နို့တိုက်ခြင်းနှင့်ချောင်းဆိုးခြင်းကဲ့သို့သောဂန္ထဝင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုတုံ့ပြန်ကြသည်။ ဒီတုံ့ပြန်မှုကဆိုးဝါးနိုင်ပါတယ် Meloxicam ကို Aspirin မခံစားသောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူများအားမည်သည့်အခါကမျှပေးသင့်သည်။ ပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှုရှိပါကအခြားသောပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါရှိသူများသည်သတိနှင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
Meloxicam နှင့်အခြား NSAID များသည်လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်၊
Meloxicam သည်အသက် ၂ နှစ်နှင့်အထက်ရှိကလေးငယ်များတွင်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းအဆစ်နာများကိုကုသရန် FDA မှအတည်ပြုသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုသုံးခုတွင်ကလေးများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းဖြင့်
အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်လူများသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပိုမိုများပြားသောကြောင့်အနိမ့်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းခံရနိုင်သည်။
Meloxicam သည်မျိုးဥထွက်ရန်နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကိုယ် ၀ န်ရရန်သို့မဟုတ်ကလေးမွေးဖွားကုသမှုခံယူရန်ကြိုးစားနေသောအမျိုးသမီးများကို Meloxicam ကိုသတ်မှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Meloxicam ကိုအပတ် ၃၀ အကြာတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကမသောက်သုံးသင့်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် NSAIDs များသည်မမွေးသေးသောကလေးငယ်၏နှလုံးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရက်သတ္တပတ် ၃၀ တွင်အမျိုးသမီးများသို့မဟုတ်မမွေးသေးသောကလေးငယ်များအတွက် meloxicam သည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိမရှိသိရန်လုံလောက်သောသုတေသနမရှိပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသောသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်စဉ်းစားနေသောအမျိုးသမီးများသည်ဆရာဝန်နှင့်ပြသနာများကိုဆွေးနွေးသင့်သည်။
Meloxicam သည်သူနာပြုနေစဉ်အတွင်းယူရန်အန္တရာယ်ကင်းသည်သို့မဟုတ်လူ၏နို့ရည်ထဲသို့မည်မျှကူးစက်သည်ကိုမသေချာပါ။ သူနာပြုမိခင်များသည် meloxicam မသောက်မီဆေးကုသမှုခံယူသင့်သည်။
Meloxicam interaction က
မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုး (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုသောက်ခြင်းဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာပြtoနာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Meloxicam ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ Meloxicam သည်အလုပ်လုပ်ပုံကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်စနစ်များ၊ အထူးသဖြင့်သွေး၊ အစာအိမ်နှင့်ကျောက်ကပ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ သို့ဆိုလျှင် meloxicam သည်အခြားဆေးဝါးများနှင့်အစားအစာများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သူတို့အားလုံးကိုနားလည်အောင်ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲ။
Meloxicam နှင့် NSAIDs
ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း meloxicam သည် NSAID ဖြစ်သည်။ သာမန် Aspirin သို့မဟုတ် Ibuprofen အပါအ ၀ င်အခြား NSAIDs များနှင့်တွဲသုံးသောအခါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ထပ်တိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်မြင့်တက်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် NSAID အားလုံးသည်အလားတူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည့်အထူးသဖြင့်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြstomachနာများဖြစ်သောအစာအိမ်နာကျင်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်းနှင့်အနာများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရဆရာ ၀ န်၏အကြံဥာဏ်အောက်မှအပ NSAID နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဆေးများကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ NSAID အမျိုးအစားများစွာကိုသောက်ခြင်းကသင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှထွက်ခွာသွားစေပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ Tylenol တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်သော Acetaminophen သည်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ဖျားနာမှုကိုကုသရန် NSAIDs များကိုပြင်းထန်စွာအစားထိုးနိုင်သည်။ သို့သော် meloxicam ကိုသောက်သောအခါရေရှည်မဟုတ်ပါ။
Meloxicam သွေးခဲဖွဲ့စည်းရန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်။ meloxicam ကို Warfarin ကဲ့သို့သောပါးလွှာသောအရာများနှင့်အတူသောက်သောအခါသွေးထွက်လွယ်သည့်ဖြစ်စဉ်များ၊ အထူးသဖြင့်အစာအိမ်သွေးထွက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် NSAIDs များသည်အစာအိမ်၏ချွဲနံရံကိုကာကွယ်ပေးသော COX-1receptors များကိုလည်းပစ်မှတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Meloxicam သောက်သူမည်သူမဆိုသည်သွေးရည်ကြည်နှင့်အတူမည်သည့်လူ၌မဆိုသွေးခဲမှုများကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ SSRIs (anti-dipressants), SNRI (antidepressants) နှင့်အချို့သော antiicancer မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် meloxicam နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါသွေးထွက်ခြင်းနှင့်အူလမ်းကြောင်းအရသွေးထွက်ခြင်းများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အချို့သောဆေးဝါးများသည် corticosteroids၊ osteoporosis မူးယစ်ဆေးဝါး (bisphosphonates) နှင့်ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးဝါးများအပါအ ၀ င်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းမှသွေးထွက်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသဖြင့်မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤအရာများကို meloxicam နှင့်ပေါင်းသောအခါဂရုတစိုက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
ဆေးကြောသန့်စင်သည့်အဟာရနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များသည်သွေးခဲခြင်း၊ ငါးဆီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ginkgo၊ မိုးမခပင်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်တစ် ဦး သည်ဤဖြည့်စွက်ဆေးများကို meloxicam နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ကောင်းပေးနိုင်သည်။
မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်သည် meloxicam ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် meloxicam ကိုသောက်ခြင်းသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သောဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတန်ပြန်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်နှင့်အတူ meloxicam ယူပြီး ACE inhibitors နှင့် angiotensin II receptor blockers (ARBs) - သွေးဖိအားဆေးနှစ်မျိုးဖြစ်သော - သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ရှိပြီးသားကျောက်ကပ်ပြwithနာများရှိသူများတွင်ကျောက်ကပ်ပြtheနာနှင့်ပိုတက်စီယမ် (hyperkalemia) ပိုမိုမြင့်မားသောအန္တရာယ်များကိုတိုးစေသည်။
များစွာသောဆေးဝါးများသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်းမြင့်တက်စေသည်။ Meloxicam နှင့်ပေါင်းစပ်။ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်နိုင်သည်။
ဒီဆေးတွေကို Meloxicam နဲ့မသောက်ဖို့တားမြစ်ထားတာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုအတူတကွသောက်တဲ့အခါသွေးပေါင်ချိန်ကိုစစ်ဆေးသင့်တယ်။
လူကြိုက်များသောဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များသည် ephedra, licorice နှင့် Yohimbe ကဲ့သို့သောသွေးပေါင်ချိန်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ Meloxicam နှင့်အတူဤဖြည့်စွက်ဆေးများသောက်သောအခါသွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားနိုင်သည်။
Meloxicam နှင့် Diuretics ဆီး
Meloxicam ကိုအချို့သော loop diuretics နှင့် thiazide diuretics များဖြင့်သောက်ခြင်းသည်ဆိုဒီယမ်ပမာဏကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်နိုင်သည့်ကျောက်ကပ်လည်ပတ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ သင်မည်သည့် Diuretic ဆီးချိုအမျိုးအစားကိုသင်သောက်နေသည်ကိုမသေချာပါကဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်၎င်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ကုထုံးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပြီးပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
Meloxicam သည်ကျောက်ကပ်၏စီးဆင်းမှုကိုထိန်းညှိပေးသောအရာများအားအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ကျောက်ကပ်သည်ခန္ဓာကိုယ်မှမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမည်မျှကောင်းစွာဖယ်ရှားပေးသည်ကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ၎င်းသည် cyclosporine နှင့် tacrolimus ကဲ့သို့သောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုကိုတိုးစေသည်။ တနည်းအားဖြင့် meloxicam သည်ကျောက်ကပ်၏စွမ်းရည်ကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်လီသီယမ်၊ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါကုသမှုအတွက်သုံးသောဆေး၊ methotrexate၊ ကင်ဆာသို့မဟုတ်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကုသရန်အသုံးပြုသောဆေးဝါးနှင့် pemetrexed ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းသောအရာဟုထင်ရသော်လည်းအမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းဆေးများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပါဝင်မှုများ၌ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ကြာကြာမနေဘဲအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆိုလိုသည်။ တနည်းကား, ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများလုံးလုံးလြားလြားကိုရှောင်ရှားဖို့မဖြစ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဆေးထိုး regimen ပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
1. ညွှန်ကြားထားသည်အတိုင်း meloxicam ကိုယူပါ
သတ်မှတ်ထားသောနေ့စဉ်ဆေးကိုသောက်ပါ။ ဆေးထိုးတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချမထားပါနဲ့။ ဆေးမသောက်ပါနှင့်၊ အကယ်၍ သင်လုပ်ပါကလွဲချော်သောဆေးပမာဏအတွက်ဆေးဝါးများထပ်မံမသောက်ပါနှင့်။
၂။ အခြား NSAID ဆေးများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ
ဆေးမသောက်ရသူများစွာသည် Aspirin အပါအ ၀ င် meloxicam ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သူတို့မှာ meloxicam ကဲ့သို့တူညီသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိပြီးတူညီသောနည်းကိုဖယ်ရှားပစ်သဖြင့် Meloxicam ကိုသောက်နေစဉ်၎င်းတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကောင်းသည်။
3. Meloxicam ကိုအစားအသောက်ဖြင့်သောက်ပါ
Meloxicam ကိုအစားအစာနှင့်မစားပဲရနိုင်သည်။ Meloxicam ကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့်အစာအိမ်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်ပါကအစာနှင့် Meloxicam ကိုသောက်သုံးရန်စဉ်းစားပါ။ Meloxicam ကိုလည်း antacids နှင့်အတူဘေးကင်းစွာယူနိုင်ပါသည်။
4. Meloxicam ကိုရေရှည်မသောက်ပါနှင့်
ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအပါအ ၀ င်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်ခြေသည်ဆေးကိုကြာကြာသောက်လေလေဖြစ်သည်။ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်, meloxicam သည်ကုထုံးရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရန်အတိုဆုံးကြာချိန်အတွက်အနိမ့်ဆုံးဆေးဖြင့်သောက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ အဆစ်အမြစ်ကဲ့သို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခွအေနေလျှင် အဆစ် နာကျင်မှုသက်သာစေသောဆေးများကိုအဆက်မပြတ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်၊ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တစ် ဦး က meloxicam ကိုရေရှည်အသုံးပြုရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုအကြံပြုနိုင်သည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သေစာသောက်ခြင်းသည်အန္တရာယ်များစေနိုင်သည်အစာအိမ်အနာထိုကဲ့သို့သော meloxicam အဖြစ် NSAIDs ယူပြီးလူများအတွက်။
သတ်မှတ်ထားသောဆရာဝန်သည်ကိုယ်ဝန်အခြေအနေ၊ မိခင်နို့တိုက်ခြင်း၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်းကုသမှုများသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်များအကြောင်းလည်းသိရန်လိုအပ်သည်။
၇။ ဆေးဝါးများအားလုံးကိုသောက်နေကြောင်းဆရာ ၀ န်ကိုပြောပြပါ
Meloxicam ကဲ့သို့သောဆေးညွှန်းဆေးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ၎င်းတို့အားမှားယွင်းသောဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အဆစ်ရောင်နာကဲ့သို့နာတာရှည်ရောဂါရှိသူမည်သူမဆိုအတွက်အသုံးပြုသောဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ပုံမှန်ဖြစ်စေခဲသည်ဖြစ်စေဆေးညွှန်းမပါသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ ဆေးများ၊ ဆေးများ၊ အပင်များနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များပါဝင်သင့်သည်။ ဆေးညွှန်းမရေးမီဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများကိုအလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အချို့သောဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်မှုများသို့မဟုတ်အစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ကြောင်းညွှန်ပြပါကသူတို့၏အကြံဥာဏ်ကိုလိုက်နာပါ။
Meloxicam , Epocrates
ညွှန်ကြား သတင်းအချက်အလက်,အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA)
အလွန်အကျွံသုံးစွဲမူးယစ်ဆေးဝါး nonsteroidal Non- ရောင်ရမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အဆိပ်သက်ရောက်မှု , မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
Meloxicam ဒြပ်ပေါင်းများအကျဉ်းချုပ် , ဆေးပညာအမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
Aspirin သည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည် , ဓာတ်မတည့ရောဂါနှင့်ရောဂါပြီးပညာအမေရိကန်အကယ်ဒမီ (AAAAI)
အဘယ်သို့သော OTC ဓာတ်မတည့်ဆေးများကိုကျွန်ုပ်ချွေနိုင်ပါသလဲ။
vicodin နှင့် percocet ကိုသင်တွဲယူနိုင်သလား
apple cider vinegar နှင့်ပျားရည်သည်သွေးတိုးကိုကျစေသည်
အမျိုးသားတစ် ဦး သည်ပိုးကူးစက်ခံရပါကမည်သို့ဖြစ်သနည်း။